Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Amiir Maxamed Saciid Cabdal-Raxman al-Mawla
Al-Mawla wuxuu noqday hogaamiyaha kooxda ISIS ka dib geeridii dhacday bishii Oktoobar ee sanadkii 2019kii hogaamiyihii hore ee kooxda ISIS Abu Bakr al-Baghdadi intii lagu gudajiray hawlgal militari oo Mareykanku qaaday.
ISIS, oo sidoo kale loo yaqaan ‘Daacish’, ayaa al-Baqdaadi ku magaabay “khilaafada” taariikhdu markay ahayd Juune 2014, goorta xooggagiisa ay qabsadeen qayb ka mid ah wadanka Suuriyo iyo Ciraaq oo ku dhawaaqay waxa loogu yeero “khilaafada” Islaamka. Sanadihii la soo dhaafay, ISIS waxay ay daacadnimo ka heshay kooxaha jihaadiyiinta iyo shakhsiyaad xagjirka ah oo ka kala socda daafaha dunida, iyagoo dhiirrigelinaya weerar ka dhaca dunida.
Abaalmarintan ayaa ah mid aad muhiim u ah la dagaalka aan kula jirno ururka ISIS iyo laamaheeda iyo shabakadaha adduunka oo dhan. Maaddaama kooxda ISIS looga adkaaday ama lagu jebiyay goobta dagaalka, waxaa na go’an in aan sheegno oo aan soo helno hoggaamiyeyaasha kooxda si isbahaysiga caalamka ee waddammada la dagaallamaya ISIS ay uga adkaadaan oo ayna u sii wadaan inay baabi’iyaan haraadiga kooxda ISIS ayna hakiyaan himilooyinkooda adduunka.